Tag: mmelite email | Martech Zone
Tag: mmelite email
"Mara onye ahịa gị" bụ oge a na-asọpụrụ maka ịga nke ọma na ụwa ahịa. Imirikiti ndị na-ere ahịa na-anakọta adreesị email, mana ha enweghị data ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ka gị na ndị debanyere aha gị kwurịta okwu nke ọma. Rapleaf na-enyere gị aka ịmụtakwu banyere ndị ahịa gị. Ha na-enye igwe mmadụ na ndụ data (afọ, okike, ọnọdụ alụmdi na nwunye, ego, wdg, pịa ebe a iji hụ ihe niile) na adreesị email nke ndị ahịa US. It ruru ihe e mefuru na mgbalị ahụ? Short azịza ya bụ ee.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-ere ahịa nọ ebe ahụ nwere ike ijikọ email gị na ndepụta ndị ahịa na data mmekọrịta na-agba ọsọ. Ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na-agbakwunye ntọala nzuzo iji belata mgbasa nke ozi a. Flowtown na Rapleaf apụtaghị ị nye ozi profaịlụ mmekọrịta ọzọ. Onye na - ahụ anya na ụlọ ọrụ ahụ dị ka Fliptop (ndị zụrụkwa Qwerly). Fliptop gbanwere azụmahịa ya na mbubreyo 2011 ka ọ na-emeziwanye ọgụgụ isi mmekọrịta mmadụ na ibe ya.